ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပြောင်းမှ ပြောင်း”
ကဗျာတွေကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားပေမယ့် ဒီကဗျာလေးကိုတော့ သဘောကျသား။
ပြောင်းဖူး ... (အဲ့င်္ဒီမှားပေါက်ကျန်ခဲ့တယ်)
ပြုတ်ဖူး ... ဟီးဟီး
အာလုံး ထိထိမိမိနဲ့ လှပတဲ့ ကဗျာပါပဲ။
ဝစ္စပေါက်ကျန်ခဲ့တာ ဖြည့်လိုက်ပါပြီ။ ထောက်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုစိုးထွန်း....။
လောလောဆယ်တော့ ပြောင်းခံချိန်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ (ပြောင်းခံနဲ့ ပတ်သက်တာ ရှိမရှိ မသိဘူး။)
အဲဒီ ဝေါဟာရတော့ ကျနော်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာအောင်သင်းကတော့ ပြောဖူးတယ်။ အရင်က အညာဖက်မှာ ကြပ်တည်းလွန်းတော့ ဆန်ဈေးကြီးပြီး ထမင်းနပ်မှန်အောင်မစားရဘူး။ ပြောင်းဆန်ခုပြီး စားရတယ်လို့ဆိုတာ။ ပြောင်းဆန်က အရမ်းကြမ်းသတဲ့။ ဆရာအောင်သင်းက ပြောင်းဆန်ကြမ်းပုံကို စာချိုးလေးနဲ့တောင် ရွတ်ပြလိုက်သေး။
You should read it and compare with your Singapore laws.
အစိုးမြင် လူဝများအား ဆန်ကျင့်ကြ
Thanks for sharing the bbc news. I appreciate the introduction of such law.
စင်္ကာပူမှာလည်း အလားတူပဲ၊ ဆန္ဒပြချင်ရင် ရဲဆီမှာ ခွင့်ပြုမိန့် ယူရတာမျိုး ရှိပါတယ်။ စပီကာကော်နာ မဖွင့်မီက အတိုက်အခံဖက်က ဆန္ဒပြခွင့် လျှောက်ထားတိုင်း ရဲက တည်ငြိမ်မှုအကြောင်းပြကာ အစဉ်လိုလို ပယ်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်း သတိပြုမိပါတယ်။
အစိုးမြင် လူဝများအား ဆန်ကျင့်ကြ
ဘယ်ကအာရပ်ကိုအားကျနေတာလဲ ကိုအနောနီးမတ် ၊ မြန်မာတွေကအာရပ်လိုမဟုတ်ဘူး လားလားမှကိုမတူဘူး မနှိုင်းစမ်းပါနဲ့ဗျာ မြန်မာပြည် ကိုစစ်တလင်းပြန်ဖြစ်စေချင်တာလား၊ ဒါမှခင်ဗျားတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ပီးလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရမှာမို့လား၊ ဝေးပါသေးတယ်ဗျာ။
ဒါကြောင့် .. "အာရပ်လှိုင်းအားကျ အဆိုးမြင်လူဝ များအား ဆန့် ကျင်ကြ" လို့ ရေးထားတာပေါ့ဗျာ..
.. ထောက်ခံကြလို့ မရေးပါဘူး။
အဲ့ဒီဟာကို ရက်အနည်းငယ်လောက်က ဖတ်ရပါတယ်။ ကန့်သတ်ချက်တွေတော့ ပါတာပေါ့။ အကောင်းဖက်က ကြည့်ရင်တော့ လုံးဝခွင့်မပြုတာထက်စာရင် မဆိုးပါဘူး။ ဟန်ပြသဘော မဟုတ်ပဲ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခွင့်ပြုမိန့် ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် အလျင်စလို ဆန္ဒပြရမယ့် အခြေအနေမျိုးအတွက်တော့ (၇)ရက် ကြိုတင်ရမှာဆိုတော့ သိပ်မကိုက်ဘူး။
တစ်ဖြည်းဖြည်း ပိုပြီး ကန့်သတ်ချက်နည်းတဲ့ ဆန္ဒပြခွင့်တွေ ရလာနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းတာပဲ။
I do not think Arab Springs can
happen in Burma. Not Facebook
youth but "Muslim Brotherhood (MB)" or Salafists made Arab Springs occured. See below.
'However, the lesson from Egypt, Tunisia, and Libya is that this generation does not possess the political networks or clout to mobilize the masses after the overthrow ofaregime--the revolutionary booty almost always goes to Islamist and salafist movements, at least for now.'
A nice pragmatic poem.
It is so nice, so clear, so simple.
ီနှံစားပြောင်း=နွားကျွေးသည့် ပြောင်းတမျိုးတဲ့။ တော်တော် ရက်စက်တဲ့ သူဌေးပဲဗျာ။ ကျုပ်တို့ အညာမှာ လူစားရတာဗျ။